ခွဲထွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ် - EPRP ၀က်ဆိုဒ်တည်ဆောက် ပြုပြင်ဖန်တီးမ
UNFC ခေါင်းဆောင်သစ်များရွေးချယ်၊ ဥက္ကဌအဖြစ် နိုင်ဟံသာကို ရွေးချယ်တင်မြောက်
EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၂၉)
EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၃)
ကေအိုင်အို အပါအဝင် အဖွဲ့လေးဖွဲ့ကို UNFC နုတ်ထွက်ခွင့်ပြု
ပဋိပက္ခအတွင်းအကြမ်းဖက်ခံရသူ အမျိုးသမီးများ တရားမျှတမှုရှိရေး စိန်ခေါ်မှုရှိနေဆဲ
အပစ်ရပ်ကာလ ဒုက္ခသည်အရေး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်ရန် KPSN ပြောဆို
ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖက်ဒရယ်ကောင်စီ (UNFC) ၏ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် စတင်ကျင်းပ
4 icons	EPRP Facebook
EnglishMyanmar	မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအားပံ့ပိုးရန်အတွက် နောက်ဆုံးရသတင်းများ၊ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်ရင်းမြစ်များ
You are at:Home»EPRP ထင်မြင်ယူဆချက်»ခွဲထွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်	EPRP ထင်မြင်ယူဆချက်
on	ဇှနျ 13, 2017
မကြာသေးမီကကျင်းပခဲ့သော ၂၁ ရာစုပင်လုံညီလာခံတွင် တပ်မတော်က ပြည်နယ်များပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ခြင်းမပြုရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်အချို့တောင်းဆိုထားသော ခွဲထွက်ခွင့် ဟူသောစကားရပ်အား တုန့်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအဆင့်အနေအထားတွင် ခွဲထွက် ခွင့် ဟူသောစကားရပ်အားဖော်ပြခြင်းမပြုလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်စေနိူင်ပါသည်။
ယခုမြန်မာနိူင်ငံသစ်သည် အစမ်းသဘောသာရှိသေးသည်ကိုအားလုံးသိထားပြီးဖြစ်သဖြင့် ခွဲထွက်ခွင့် သည် ၁၉၄၇ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲတွင် ပါရှိထားသည်ဟုနှလုံးသွင်းထားနိူင်ပါက အားလုံး အတွက် အဆင်ပြေနိူင်ပါသည်။ ပြည်ထောင်စုနှင့်ပူးပေါင်းနေထိုင်ပါမည်ဟု သဘောတူညီထားသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအတွင်း ၎င်းတို့ကိုမည်သို့ပြုမူဆက်ဆံကြမည်ကို သေချာရေရာစွာမသိရှိရသည့်အတွက် ခွဲထွက်ခွင့်ဆိုသည့်စကားရပ်သည် ၎င်းတို့ကိုစိတ်သက်သာရာ ရစေသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်မိပါသည်။
နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်ကြာပြီးနောက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများသည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင် ယခု အချိန်အထိ ၎င်းတို့ပြုမူဆက်ဆံခံနေရခြင်းကို ကျေနပ်မှုမရှိကြပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ စိတ်သက်သာမှုမပေး နိူင်ပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ခွဲထွက်ခွင့်ဟူသောစကားရပ်မပါဝင်သည့် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုမရှိသော တပြည်ထောင် စနစ်တောင်းဆိုချက်အား တိုင်းရင်းသားအချို့လက်ခံလိုစိတ်မရှိကြခြင်းမှာ သိပ်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။
ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသစ်တွင် ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဍန်များပါရှိရေးမှာ တပ်မတော်နှင့် အစိုးရ၏သဘောပင်ဖြစ်ပါသည်။ သို့မှသာ ခွဲထွက်ခြင်းဆိုသည့်စကားရပ်သည် ပယ်ပျောက်သွားပါ လိမ့်မည်။
About	In April 2013 The Ethnic Peace Resources Project (EPRP) emerged out of the work of the Myanmar Peace Support Initiative (MPSI),aNorwegian led international initiative to support the peace process in Myanmar. MPSI was established to work with the government, EAOs political groups, civil society actors, communities, and international partners to provide support to the ceasefire process.
အကြောင်းအရာ	၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာအစိုးရသစ်မှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များ( EAOs )အား ဦးတည်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှု့ ပဏာမခြေလှမ်းများကို စတင်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ပါသည်။
EPRP အထင်အမြင်	ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ ။ ။ ရှေ့သို့လှမ်းချီရန်လိုအပ်သောခြေလှမ်း
ဇှနျ 13, 2017EPRP	ခွဲထွက်ခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်
ဇှနျ 13, 2017EPRP	မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဒေသများရှိ မြေယာနှင့်မြေယာဥပဒေ
ဇနျနဝါရီ 11, 2017EPRP	EPRP Highlights	UNFC ခေါင်းဆောင်သစ်များရွေးချယ်၊ ဥက္ကဌအဖြစ် နိုင်ဟံသာကို ရွေးချယ်တင်မြောက်
ဇှနျ 27, 2017Mizzima	EPRP ကရင် ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၂၉)
ဇှနျ 24, 2017EPRP	EPRP ရှမ်း ရေဒီယုို အစီအစဉ်(၃)
ဇှနျ 24, 2017EPRP	EPRP အဓိကဖော်ပြသောအရာများ	ကျိန်စာသင့်ရတနာများ
မေ 18, 2017Global Witness	မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုဒေသများရှိ မြေယာနှင့်မြေယာဥပဒေ
ဇနျနဝါရီ 11, 2017EPRP	နှုတ်ဆိတ်သူတို့၏အသံများ
ဒီဇငျဘာ 16, 2016EPRP	EnglishMyanmar	အသုံးပြုရာတွင် လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များ